काँग्रेसले सङ्गठन सदृढिकरणका लागि के के निर्णय गर्यो ??? हेुर्नस् भिडियो । – Himshikharnews.com
काँग्रेसले सङ्गठन सदृढिकरणका लागि के के निर्णय गर्यो ??? हेुर्नस् भिडियो ।
३१ भाद्र २०७५, आईतवार २३:०२
सोलुखुम्बु । नेपाली काँग्रेस सोलुखुम्बुले पार्टीका स्थानीय सभापति तथा सचिवहरु, स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु, भातृ तथा सुभेच्छुक संस्थाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु सहितको भेला तथा छलफलले सङ्गठन सदृढिकरणका लागि विभिन्न कार्यहरु गर्ने भएको छ ।
पत्रकार सम्मेलन गरी दिएको २०७५ साल कात्र्तिकदेखि २०७६ जेष्ठसम्मका कार्यक्रम तथा काँग्रेसलाई मिलाएर जाने रणनीति तय गरेको सभापति विनोदकुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा राष्ट्रिय तथा स्थानीय तहका समसामयिक अवस्थाका बारेमा विभिन्न निर्णय गरेको छ ।
विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोला ।